Drake's Next Album 'Echiche Site 6' Iji Naanị On Apple Music | Esi m mac
N'ihi ịntanetị, enwere ike ịpụ iche n'oge a. Ebe ebe ndi mmadu n’azu agha n’abia album ozo Drake. E kwuputala na onye omenkà ama ama Drake, ga-ewepụta album ya ọzọ akpọrọ 'Echiche ndị sitere na 6', dị ka nanị Apple Music. Nkwenye ahụ sitere na weebụ 'Pitchfork', ebe Apple kwadoro na ọhụụ ọhụụ ọhụụ maka Eprel 29 ga-adị naanị site na Apple Music.
Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na enweghị ozi na oge ole exclusivity ga-adịgide. Ntughari a na mwepụta nke ọba egwu nwere ike ọ bụghị nnukwu ịtụnanya, na-eche na ọ ga-abụ otu site na ọba na-esote. 'Otu agba egwu', nke n’onwe ya ga-anọghị na Apple Music.
Drake nwere mmekọrịta chiri anya na Apple n'oge a, ebe onye na-ese ihe pụtara na ogbo n'oge izipu Apple Music dị ka ị pụrụ ịhụ na vidiyo nke anyị tinyegoro. Ọbụna Apple kwụrụ ụgwọ akụkụ dị mkpa nke vidiyo vidiyo 'Hotline Bling'.
Dị ka anyị kwurula na mbido post, a ga-ewepụta album a na Apple Music nke a April 29. Drake ekerịtala ọtụtụ abụ ọhụrụ na 2016. Na Jenụwarị, ọ malitere 'Oge ezumike nke iri na isii' en 'OVO Radioda Radio'. Na mgbakwunye na 'Stdị Pop', weputara egwu ohuru na mbido izu a, 'Otu Dance'.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Album Drake na-abịanụ 'Echiche Site na 6' naanị na Apple Music
Japan Research and Development Center na-egbu oge imeghe